Guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland oo yeeshay fadhigii ugu horeeyay, maxay uga hadleen? – Kalfadhi
Guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland oo yeeshay fadhigii ugu horeeyay, maxay uga hadleen?
April 14, 2019 April 15, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada shannaad ee Puntland ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horeeyay kadib kalfadhiga 43aad ee goluhu ku jiray teer 1dii Janaayo ilaa 31dii Maarso, marka laga reebo fasaxyo koob kooban oo ay galeen.
Gudoomiyaha golaha mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa guddoomiyay kulanka, waxaana fadhiyay dhammaan madaxda guddiyadda kala duwan ee baarlamanka oo ka kooban 10 guddi iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame
Kulankan ayaa goluhu uga hadlay arrimaha abaaraha, amniga iyo tacadiyadda ka dhanka ah haweenka gaar ahaan kufsiga oo sidii xarig furtay waayadan dambe ugu sii kordhaya deegannada Puntland.
Xoghayaha golaha wakiillada Cabdirisaaq Xiddig Warsame ayaa sheegay in goluhu uu go’aamiyay in guddiga shuruucda iyo caddaaladda iyo guddiga xuquuqda Aadanaha loo xilsaaray in ay xog dhab ah ka raadiyaan arrinta kufsiga si go’aanno masiiri ah looga soo saaro.
Guddoonka iyo xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada oo ku guda jira fadhiga koowaad
Ugu dambayntii, goluhu waxay ku baaqeen in laga qayb-qaato wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee ay Puntland wajahayso, qodobkaas oo qayb ka ahaa ajanadaha kulanka koowaad ee maanta dhacay.
Xoghayaha golaha wakiillada Puntland mudane CabdirisaaqXiddig wuxuu warbaahinta Kalfadhi u sheegay in kulankani uu yahay kii ugu horeeyay ee ay guddigu yeelanayaan, waxaana inta goluhu fasaxa ku jiro ay guddigu ku kulmi doonaan toddobaadkiiba mar.
Golaha wakiillada oo hadda fasax ku kala maqan ayaa guda geli doona kalfadhiga 44raad bartamaha Juun sida uu dhigayo xeer-hoosaadka goluhu.